Ngingawadla yini ama-cherries wesifo sikashukela sohlobo 2? > Ukudla ngesifo sikashukela
Ngingawadla yini ama-cherries wesifo sikashukela sohlobo 2?
Izitsha zamazambane ezilandelayo azivunyelwe ngokuphelele ukondla umuntu ogulayo:
Awukwazi ukondla isiguli umkhiqizo othosiwe emafutheni ezilwane.
Kwenqatshelwe ukupheka amazambane abunjiwe wesifo sikashukela, ikakhulukazi uma kufakwa ibhotela nobisi kuso. Kwezinye izimo (uma udokotela wakho evuma), ungasuthisa onesifo sikashukela ngalesi sitya, kodwa amazambane aboshwe kuphela okufanele alungiselelwe emanzini. Ngokuqukethwe kwayo kwekhalori, amazambane abunjiwe asondela kwisipuni soju, ngakho-ke kungcono ukungazibeki engcupheni.
Awukwazi ukunikeza izitsha namazambane amancane ezigulini ezitholakala zinesifo sikashukela, ngoba ama-nitrate ngesilinganiso esikhulu angaba khona ezitshalweni zezimpande ezinjalo. Ikakhulu kunenqwaba yazo kumazambane okuqala, lapho kunamavithamini ambalwa kakhulu namaminerali awusizo umzimba odinga umuntu onesifo sikashukela.
Cherry sikashukela: zokupheka
Ngakho-ke, njengoba sekuvunyelwe kakade ukudla ama-cherries, umuntu akufanele akhohlwe ngezinye izindlela zokupheka zawo. Vele, onke angafaka kuphela esikhundleni soshukela. Isibonelo, ukwenza i-jam ezuzisa umzimba, uzodinga:
ungasebenzisi ngaphezu kwe-300-400 gr. amajikijolo asuswe ngaphambili imbewu kanye neziqu. Kubalulekile ukuthi ama-cherries ahlanzekile futhi angabi nomonakalo.
ngemuva kokulungiselela okunjalo, kuthululelwa esitsheni lapho zizobilisa khona ngemuva kwalokho. Kubalulekile ukuthi ibe yi-cauldron noma yimuphi omunye umkhumbi obunjiwe ngotshani,
njengoba ama-cherries abilisiwe, kuzodingeka kufakwe inani elincane likamiseli kashukela. Kodwa-ke, ungakwenza lokhu ekugcineni kwenqubo yokupheka, kepha kuze kufike ukuqina kokugcina kwesisindo esikhona.
Ngempilo yabanesifo sikashukela nokwenza ngcono ukunambitheka komkhiqizo, kunconyelwa ukusebenzisa inani elingeziwe lelamula noma isinamoni. Imisebenzi enjalo evunyelwe nayo ingenziwa kuphela ngemuva kokuthi umkhiqizo ulungele ngokuphelele.
Khumbula ukuthi lokhu kwandisa inkomba ye-glycemic. Ngakho-ke, ukuze uqede amathuba wokulimala kanye nomphumela ushukela wegazi, kuyadingeka ukusebenzisa i-cherry jam ngenani elingeqi amahora amabili kuya kwamathathu.
Kwabashukela, umkhiqizo uphekwa kahle kuhhavini. Ama-tubers abhakwe kahle ahamba neminye imifino kanye nesaladi. Ukujabulisa isiguli ngohlobo loku-1 bese uthayipha amazambane wesifo sikashukela, ungasebenzisa izindlela ezilandelayo:
Amazambane abhakwe. Izilimo eziyizigaxa ezifakwa emanzini zibunjiwe, zisikwe izingcezu bese zibhakwa imizuzu engaba ngu-30. Qoba ugarliki, hlanganisa ne-olive olive kanye namakhambi. Amazambane aqediwe abekwe esitsheni, agcotshwe ngosawoti okuholela, ambozwe ngesembozo bese ashiywa imizuzu engu-5, emva kwalokho ayakhonzwa.
Amazambane afakwe Imifino yokuhlanzwa ehlanza kahle iyabhekwa bese izimbobo ezincane zenziwe kuyo ngayinye. Basabalalisa okuphekwe ngaphakathi kubo: izingcezu zefilidi ebilisiwe, ubhontshisi abilisiwe, amakhowe, inhlanzi noma ukudla kwasolwandle. Ungapheka ukugxusha okwenziwe ekhaya bese ukugxisha ngemifino. Ama-tubers asakazwa ekhasini lokubhaka futhi abhakwe imizuzu engama-20. Ngemuva kwalokho inkathi ngosawoti ukhilimu omuncu noma ufafaze ngamakhambi.
Amaqanda athosiwe. Ngokudla kwasekuseni unganikela ngamaqanda aqhekeziwe. Ukupheka kulula kakhulu. Amaqanda athululelwa kuhhavini namazambane abhakwe imizuzu eyi-10 ngaphambi kokuphela kokubhaka.
Contraindication nokusetshenziswa kwama cherries kwiziguli ezinesifo sikashukela
I-Berry ingadliwa kuphela emisha noma eqandisiwe, ngaphambi kokukufaka ekudleni kwakho, kufanele uthintane nodokotela futhi udlule kuzo zonke izivivinyo ezidingekayo bese uvivinya. Kwezinye izimo, izici ngazinye kanye nenkambo yesifo sikashukela kunika ukugxuma okukhulu kumazinga kashukela, ngakho odokotela bavame ukutusa ukusebenza ngokulandela uhlelo:
yidla i-1 berry - ukulawulwa kweshukela nge-glucometer, amajikijolo ama-2 - ukulawula ushukela, njll kuze kufike kumagremu ayi-100 e-cherry amnandi avunyelwe. Uma kwesinye isigaba isiguli sibona ukugxuma okubukhali kushukela, khona-ke kufanele ugxile kunani eledlule lamajikijolo, elinikeze inkomba ejwayelekile yezinga loshukela.
Kulesi sihloko, uzofunda ngokudla okunempilo kwabanesifo sikashukela sohlobo 2. , Ungayifaka ngokuphephile ekudleni kwakho.
Imiphumela yokungondleki kahle kwabanesifo sikashukela
Uma ungalandeli imiyalo yokudla kwabanesifo sikashukela, ungathathi imishanguzo edingekayo ebekwe udokotela wakho, lowo muntu ngokwakhe ukhombisa ukubonakala kwemiphumela emibi yesifo. Ngaphezu kwalokho, ijubane lokukhula kwabo liyakhula minyaka yonke. Izici eziningi zangaphandle ezingancike entandweni yomuntu zingaba nesandla kulokhu. Isifo sikashukela singalinda:
kwehle ukungatheleleki komzimba
Iziguli zidinga ukudla kakhulu sikashukela, ngoba ingxenye yemiphumela etholakala ekwelashweni incike ekunakekelweni okufanele.
Esimweni esibi kakhulu, ukufa kungenzeka. Ama-pathologies amaningi asethuthukile emzimbeni awanawo amandla okubuyisa, futhi akusekho ukuthi awamisa. Akukho lutho olunzima ekulandeleni izincomo nemithetho yokudla okufanele. Eqinisweni, uhlu lwemikhiqizo evinjelwe alunkulu kangako. Ngohlobo 1 nesifo sikashukela sohlobo 2, imikhawulo yokudla okunempilo icishe ifane, umehluko ungaba sesimweni esetshenziswayo.
Izinzuzo nokulimala kwama-cherries
Ngenxa ye-coumarin ekhona kumajikijolo, kuncipha kahle igazi, kuthathwe umfutho wegazi, ukuvinjwa kwegazi kuvinjelwe, futhi nesifo se-atherosclerotic siyavikeleka.
Ngenxa yokwakheka okubaluleke kangako, ama-cherries kushukela awugcini nje ngomkhiqizo ovinjelwe, kodwa futhi awusizo, ngoba anomthelela omuhle ohlelweni lwezinhliziyo. Lo mkhiqizo uqeda i-anemia, ukhulula umzimba wobuthi nangobuthi, uzuzisa kakhulu ezifweni ezahlukahlukene zamadivayisi we-articular.
Ngokusetshenziswa kwama-cherries ejwayelekile, izinkinga ezahlukahlukene zokugaya zingagwenywa, kufaka phakathi ukuqunjelwa, futhi ubuthongo buqalwa. Ngosizo lwama-cherries, kungenzeka ukuthi ususe ngokweqile usawoti emzimbeni, ongadala izifo ezingathandeki zohlelo lwe-musculoskeletal.
Uma umuntu ehlala esifundeni esingathandeki emvelweni, lapho la majikijolo edliwa, umzimba uthola ukumelana nezinye izici ezingezinhle ezivela ngaphandle.
Ngesifo sikashukela, odokotela abaluleki ukuthi bangadli amajikijolo amasha kuphela, kodwa futhi baphuze i-decoction yamaqabunga, amagxolo nezimbali ezingama-cherry. Ngesifo sikashukela, ungadla izithelo ezifriziwe, ama-cherries athosiwe, i-cherry jam. Kepha uma usebenzisa owokugcina, kubalulekile ukuthi azilungiselele ngaphandle kokusebenzisa izithako zokuzivikela noma izithambisi zokwenziwa.
Njengoba i-berry iqukethe i-coumarin, ixubha igazi ngokuphelele, inciphise umfutho wegazi, ivimbele ukubanga kwegazi, futhi ivimbele ukuthuthukiswa kwe-atherossteosis. Ngakho-ke, i-cherry yabanesifo sikashukela akuyona nje umkhiqizo ogunyaziwe, kodwa futhi ibaluleke kakhulu, ngoba inomphumela omuhle kakhulu enhliziyweni nasemithanjeni yegazi.
UCherry unciphisa i-anemia, asuse ubuthi emzimbeni, ulusizo kwizifo zamathambo nezinye izifo ezihlangene.
Ukudla izithelo ezintsha kanye namajikijolo kuhle emzimbeni, noma ngabe kunasifo, kepha kwesinye isikhathi kudingeka wazi isilinganiso futhi ulawule izingxenye ezisele. Isibonelo, ama-cherries nama-cherries anesifo sikashukela i-mellitus (DM) angadliwa ngaphandle kokulimaza impilo, kepha kuphela ngokulinganisa, kungenjalo akunakulungele ukusetshenziswa kakhulu.
Lawa majikijolo aqukethe izinto eziningi ezibalulekile kwabanesifo sikashukela, kufaka phakathi ama-anthocyanins, asiza ukuguquguquka kwama-pancreas. Ngakho-ke, bathuthukisa ukukhiqizwa kwe-insulin futhi ngenxa yalokho, amazinga kashukela wegazi ayancipha.
Abanye abantu abazi ukuthi abanesifo sikashukela sohlobo 2 bangawasebenzisa yini ama-cherries nokuthi kungani bawadinga ekudleni kwabo, kepha ungahlulela izinzuzo noma ukulimala kwale berry ngemuva kokujwayela ukwakheka kwayo:
Amavithamini eqembu B, C, ne-retinol ne-tocopherol,
I-calcium (Ca) neMagnesium (Mg),
I-Iron (Fe), iFluorine (F) Chromium (Cr), iCabolt (Co),
Ngemuva kokufunda ukwakheka kwayo, imibuzo mayelana nokuthi ama-cherries awusizo yini nokuthi ayanda ushukela wegazi akufanele yini ihlale, ngoba i-coumarin izinza umfutho wegazi futhi ivimbele i-thrombosis kanye ne-atherosclerosis, futhi lezi zinkinga kusifo sikashukela zivame kaningi ukwedlula kubantu abaphilile .
Ngaphezu kwalokho, lo berry ulusizo ekususeni ubuthi emzimbeni, ekwelapheni i-anemia (i-anemia) kanye nasekuvimbeleni izifo zenhliziyo.
Ngaphezu kwalezi zimfanelo, ama-cherries angathuthukisa ukugaya futhi enze i-stool ihlale ngokwejwayelekile, futhi futhi asize ngokuqwasha. Le berry ilungele nokususa usawoti omningi emzimbeni, okungadala i-gout nokuphazamiseka kwe-metabolic.
Kuyasiza futhi nabantu abasendaweni engcoliswe imvelo, ngenxa yokuthi isusa ubuthi ngokushesha futhi yenza umzimba womuntu ulwisane kakhulu nabacasulayo bangaphandle.
Ukuqala kwesithelo nezithelo zomamangunga ngonyaka kuvula ngama-cherries, okungenye yamajikijolo athandwa kakhulu kubantu banoma yimiphi yobudala. Kukuye ukuthi "i-vitamin boom" yehlobo iqala, umzimba ubheke phambili kuyo ebusika obude nobandayo, obuhambisa umzimba.
I-Cherry inohlu olukhulu lwezakhiwo ezinhle ngenxa yokwakheka okuhle, kepha, njenganoma iyiphi enye i-berry, inomphumela "oyingozi", okufanele unakwe lapho udliwa.
Amazambane aqukethe inani elikhulu lesitashi. Ingenye yama-polysaccharides awusizo kakhulu ngoba igaywe kalula. Kepha ukuphuza ngokweqile kuyingozi. Kunezindlela zokukhipha isitashi kumazambane, emva kwakho ongeke wesabe inhlala-kahle.
Enye yalezi zindlela ezishayo imifino. Kuyadingeka ukuwufaka, ngoba inkomba ye-glycemic ingama-80%, okungahle kube yinto ephezulu kakhulu koshukela.
Inqubo ibukeka kanjena:
Imifino ibunjiwe bese iyagezwa.
Beka epanini bese ugcwalisa ngamanzi abandayo.
Imifino kufanele ibe semanzini ubusuku bonke.
Ngalesi sikhathi, iningi lesitashi (njengezinye izinto eziyingozi empilweni yesiguli) lizongena emanzini.
Ngemuva kokugcotshwa, amazambane aphekwe agaywa kalula yisisu futhi akuholeli ekwandeni kashukela wegazi.
Ukuze upheke, udinga ukukhetha amazambane afanele. Kungcono ukuthenga imifino emincane hhayi enkulu kakhulu. Kuhle ukuqaphela ukuthi omncane amazambane, amavithamini amaningi aqukethe, ikakhulukazi i-C, B, i-PP, i-zinc, i-iron, i-calcium ne-magnesium. Lezi zinto zilusizo ngohlobo 2 sikashukela ukuqinisa izindonga zemithambo yegazi.
Lapho uthwala ingane, ama-cherries wesikhathi sonyaka kufanele afakwe kwimenyu yansuku zonke. Lawa majikijolo, ngenxa yokuqukethwe amavithamini, athuthukisa inhlala-kahle ephelele, enza lula inkambo yokukhulelwa, avimbele ukubonakala kwezinkinga ezahlukahlukene. Ukufakwa kwama-coumarins kuvimbela i-thrombosis. Ukudla ama-cherries kuqinisa imikhumbi emincane futhi kuvimbela nomfutho wegazi ophakeme.
Kepha ngesifo sikashukela sokukhulelwa, odokotela babeka imikhawulo. I-sweet cherry ingaba yingozi kumama olindele.
Uma udla amajikijolo anejusi ngamanani amakhulu, lesi simo sizoba sibi. Ushukela ophakeme awuthinti impilo yowesifazane kuphela, kodwa futhi ungavusa ukuthuthukiswa kwe-pathologies esibelethweni.
Ezimweni ezinzima kakhulu, ngisho nokufa kwengane kungenzeka. Ngemuva kokuzalwa, izinkinga ziyaqhubeka.
Ezinye izingane zinobunzima bokuphefumula, ngokusho kokuhlaziya, eziningi zitholakala nge-hypoglycemia.
Izinkinga zempilo zidinga indlela ehlukile yokwelashwa - okuningi kuya ngesizathu esiyimbangela salesi sifo. Esimweni lapho kutholakala ukwanda ushukela wegazi, ngaphezu kokwelashwa okukhethekile, udokotela ubuye anikeze nokudla kokudla okuhlose ukunciphisa kanye nokulungisa izinto ezingena emzimbeni.
Imikhawulo ingaba eqinile noma engabalulekile - uhlobo lokudla nemikhiqizo evunyelwe ukusetshenziswa ithuthukiswa nguchwepheshe ngokwesisekelo sokuhlolwa komuntu, ngakho-ke awukwazi ukudala imenyu ngokwakho.
Ukuze wenze ushukela wegazi ube ngokwejwayelekile, udinga ukudla kaningi, kodwa kancane kancane. Okusho ukuthi, njalo emahoreni angama-2-3 udinga ukuthatha ingxenye encane yokudla.
Lokhu kuzokusiza ungagadli kuphela amazinga kashukela wegazi, kepha futhi wehlise isisindo ngokusheshisa izinqubo ze-metabolic. Ukudla ngakunye kufanele kulingana nokuqukethwe kwe-carbohydrate nokuqukethwe kwama-khalori ekwakhekeni kwawo.
Ukudla kufanele kuklanywe ngendlela yokuthi kuqukethe imikhiqizo ebilisiwe noma ebhakwe, kanye nezitsha ezigobhoziwe.
Ukudla kwe-carbohydrate ephezulu kuvinjelwe - ushukela kanye nama-dessert, ama-khekhe, izithelo ezimnandi namajikijolo, ilayisi elimhlophe, i-semolina, iziphuzo ezinoshukela, uju, ujamu, ujamu, u-ayisikhilimu, ushokoledi, isinqe, ibhotela, imayonnaise, ukhilimu kanye no-ukhilimu omuncu , imikhiqizo yobisi noshizi wokuqukethwe okunamafutha amaningi, ukudla okusemathinini, izinto zokuthambisa emafutheni, imbewu namantongomane, amasoseji, kanye nemikhiqizo yotshwala.
Kwishukela, kunconywa ukusebenzisa ukhukhamba notamatisi, iklabishi yazo zonke izinhlobo, i-zucchini, isitshalo seqanda, noma isiphi pepper, amakhambi, izaqathe, isithombo, ubhontshisi oluhlaza - okungukuthi imifino emnandi. Iziphuzo zivunyelwe - itiye nekhofi, kepha ngaphandle koshukela ongeziwe.
Ungadla izinhlanzi, inyama ebilisiwe enamafutha amancane, inkukhu ngaphandle kwesikhumba, imikhiqizo ephansi enobisi olunoshukela omuncu, ushizi onamafutha. Inani elincane lamafutha zemifino, izithelo ezingafakiwe, i-pasta nezinhlamvu ezinomkhawulo kuvunyelwe.
Futhi, izikhathi ezi-1-2 ngesonto, ungangeza ummbila nama-legumes ekudleni.